Soosaaraha Iftiinka Led ee Xirfadlaha ah, Xalka Iftiinka Led | Huayi Iftiin
NUUR CAAFIMAAD OO NOLOL WANAAGSAN
Waxaa la aasaasay 1986, oo ku taal magaalada Guzhen ee magaalada Zhongshan, oo ah "caasimadda iftiinka" ee Shiinaha.
Ku takhasusay R&D, wax soo saarka iyo iibinta alaabta iftiiminta iyo alaabta kale ee la xidhiidha
Naqshadaynta Penguin Modeling
oo ah sumacad sumcad weyn tan iyo 1986, HUAYI Lighting waa maskax furan si ay ugu hogaamiso warshadaha iftiinka ee madal warbaahineed oo kala duwan. Wax dhib ah maleh kala duwanaansho buuxda oo gudaha ah oo qurux badan& Alaabooyinka nalalka dibadda, ama qolka bandhiga iftiinka caalamiga ah ee 7-xiddig, ama in ka badan 200000sqm xarunta warshadaynta wax soo saarka, na raac, waxaan kuu soo bandhigi doonaa safar cajiib ah oo aad ku ogaanayso HUAYI. LIVE STREAM toddobaadle ah ayaa lagu qaban doonaa Alibaba International iyo warbaahinta kale ee bulshada si ay u muujiyaan HUAYI showroom.& dulmar warshadeed iyo kuwa cusub ee ganacsiga, qurxinta& alaabta iftiinka,iftiinka Pendant warshadaha, iftiinka qaabka warshadaha, iftiinka qaabka casriga ah, iftiinka joojinta dhalada,iftiin la habeeyey, tayo la isku halayn karo oo la aamini karo.
Ku soo dhawoow dareenkaaga joogtada ah. yaabab badan ayaa ku sugaya...